Jimco, Juun 24, 2022 Jimco, Juun 24, 2022 Ann Smarty
In ka badan toban sano, Google waxay la dagaallameysay khuraafaadka ciqaabta nuqul ka koobnaanta ah. Maaddaama aan weli sii wado su'aalaha goobta, waxaan u maleynayay inay mudan tahay in laga wada hadlo halkan. Marka hore, aan ka wada hadalno oraahda: Waa Maxay Nuqul Ka Kooban? Waxyaabaha nuqullada ah guud ahaan waxaa loola jeedaa waxyaabo muhiim ah oo ka kooban gudaha ama guud ahaan qaybaha gebi ahaanba u dhigma waxyaabo kale ama si la mid ah u muuqda. Badanaa, tani maahan khiyaano asal ahaan. Google, Ka Fogoow Nuqul